DEG-DEG: Man City Oo Aan Cuno Qabatayn Laba Xili Suuq Ah La Kulmi Doonin Iyo Kiiskii Waqtiga Dheer Qaatay Ee Benjamin Garre Oo Ay Maxkamada CAS Go’aan Ka Gaadhay.. – GOOL24.NET
DEG-DEG: Man City Oo Aan Cuno Qabatayn Laba Xili Suuq Ah La Kulmi Doonin Iyo Kiiskii Waqtiga Dheer Qaatay Ee Benjamin Garre Oo Ay Maxkamada CAS Go’aan Ka Gaadhay..
Maamulka kooxda Manchester City ayaa helay war ay aad ugu farxeen kadib markii ay maxakamada xalalinta khilaafaadka Sportska ee CAS ay go’aan ka gaadhay kiiskii waqtiga dheer qaatay ee kooxda Sky Blues loogu soo eedeeyay in ay sharciga suuqa kala iibsiga ku jabisay Benjamin Garre, waxaana laga cabsi qabay in Man City ay la kulanto cuno qabtayn dhinaca suuqa kala iibsiga ah haddii kiiskan lagu cadayn lahaa.
Manchester City ayaa lagu soo war galiyay in ayna wax ciqaab ah kula kulmi doonin dhinaca suuqa kala iibsiga kadib markii ay ku guulaysteen dhegaysigii waqtiga badan qaatay ee kiiskii da’yarka Man City ee Benjamin Garre kaas oo kooxda Etihad Stadium loogu eedeeyay in ay sifo sharci daro ah kula soo wareegtay.
Kooxda ree Argentina ee Velez Sarsfield ayaa xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA dacwad u gudbisay xagaagii la soo dhaafay markaas oo ay kooxda Manchester City ku soo oogdatay dacwad ka dhan ah in ay sifo sharci daro ah kooxdeeda kagala soo wareegtay Benjamin Garre oo 16 sano jir ahaa. Waxayna sidoo kale kooxda ree Argentina ee Velez ay dacwadeeday gaysay maxkamada xalinta khilaafaadka Sportska ee CAS.
Haddii Manchester City lagu heli lahaa eedaynta iyo dacwada kooxda ree Argentina ee Velez Sarsfield waxaa lagu xukumi lahaa in laba xili suuq ayna wax dhaq dhaqaaq ah ka samayn karin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda taas oo ahayd waxa ugu wayn ee ay maamulka Man City ka cabsi qabeen balse ay hadda neef wayni ka soo fuqday.
Manchester City ayaa lagu soo war galiyay in go’aan laga gaadhay dacwadii ay kooxda Velez Sarsfield soo gudbisay isla markaana ayna wax ciqaab ah kula kulmi doonin qaabkii ayula soo wareegtay Benjamin Garre waxaana dhawaan la filayaa in maxkamada CAS ay war rasmi ah arintan ka soo saari doonto balse haddaba warkan Man City ayaa heshay.
Laakiin wali kooxda Velez Sarsfield ayaa haysata fursada ay rafcaan kale kaga qaadan karto go’aanka maxkamada CAS ee kiiska Benjamin Garre taas oo wali arinta ka sii dhigi karta mid sii jiitami karta waxayna ku xidhnaan doontaa haddii Velez ay kiiskan sidaa kaga hadhi doonto iyo in ay sii wadi karto.
Kooxda kiiskan FIFA iyo CAS gaysay ee Velez Sarsfield ayaa ku dacwootay in Manchester City ay da’yarka Garre la soo xidhiidhay markii uu 15 sano jirka ahaa kadibna markii uu noqday 16 sano jir ay ku jabisay sharciga suuqa kala iibsiga ciyaartoyda da’yarta ah, laakiin Man City ayaa markasta ku adkaysanaysay in ay qaabkii sharciga ahaa u martay saxiixa Garre.
FIFA ayaa hore Manchester City kiiskan ugu xukuntay iyada oo kooxda Velez markii labaad kiiskeega gaysay maxkamada CAS taas oo markale ayiday go’aankii FIFA waxayna haddaba City ka badbaaday go’aan kooxdeeda dhibaato ku noqon lahaa haddii qalad lagu heli lahaa.